Uyicwangcisa njani iFayile yePST ye-PST?
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Uyicwangcisa njani iFayile yePST ye-PST?
0.02 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,612)
Ifayile ye-Outlook PST iya kuba nkulu emva kokuba isetyenziselwe ixesha elithile. Ngokwenyani kunokwenzeka ukunciphisa ubungakanani bayo ngokudityaniswa okanye ngokucinezelwa. Zimbini iindlela zokwenza oko:
1. Usebenzisa uphawu lwe "Compact" kwi-Outlook:
Le yindlela esemthethweni yokudibanisa ifayile enkulu ye-PST, ngolu hlobo lulandelayo (i-Outlook 2010):
nqakraza i ifayile ithebhu.
nqakraza Iisetingi ze-akhawunti, uze ucofe Iisetingi ze-akhawunti.
Kwi Iifayile zeDatha tab, cofa ifayile yedatha ofuna ukuyicwangcisa, emva koko ucofe izicwangciso.
nqakraza Icwecwe ngoku.
Emva koko i-Outlook iya start icwecwe ifayile yePST.
La ngamanyathelo e-Outlook 2010. Kwezinye iinguqulelo ze-Outlook, kukho imisebenzi efanayo. Umsebenzi osesikweni we "Compact" uya kususa izithuba ezisetyenziswa zizinto ezisuswe ngokusisigxina kunye nezinye izinto ezingasetyenziswanga. Nangona kunjalo, le ndlela icotha kakhulu xa ifayile ye-PST inkulu.
2.Compact ifayile yePST ngesandla:
Ngokwenyani ungayicofa ngokwakho ifayile yePST, ngolu hlobo lulandelayo:
Yenza ifayile entsha ye-PST.
Khuphela yonke imixholo kwifayile yoqobo ye-PST kwifayile entsha ye-PST.
Emva kokusebenza kwekopi, ifayile entsha ye-PST iya kuba yifayile ye- idibeneyo Inguqulelo yefayile yoqobo ye-PST, kuba izinto ezisuswe ngokusisigxina kunye nezinye izinto ezingasetyenziswanga aziyi kukhutshelwa.
Ngokusekwe kuvavanyo lwethu, indlela yesibini ikhawuleza ngakumbi kunendlela yoku-1, ngakumbi xa ubungakanani befayile ye-PST bukhulu. Ke sicebisa ukuba usebenzise le ndlela ukudibanisa iifayile zakho ezinkulu ze-PST.